Nge-22 ka-Agasti zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-22 ka-Agasti ngeZodiac nguLeo-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Nge-22 ka-Agasti ngeZodiac nguLeo-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ka-Agasti 22 ngu-Leo.
Uphawu lweenkwenkwezi: Ingonyama . Imele abantu abazalwe phakathi kukaJulayi 23 kunye no-Agasti 22 xa iLanga likuLeo. Olu phawu lubonisa icala elinobungangamsha nelinika amandla aba bantu.
Inkqubo ye- Leo Constellation Ngenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini ze-zodiac, egubungela ukubonakala okubonakalayo phakathi kuka-90 ° kunye ne--65 °. Ilele phakathi kweCancer ukuya eNtshona kunye neVirgo ukuya eMpuma kwindawo engama-947 degrees degrees. Inkwenkwezi eqaqambileyo ibizwa ngokuba nguAlfa Leonis.
Igama Leo yingcaciso yesiLatin yeNgonyama, uphawu lwe-zodiac ka-Agasti 22. AmaTaliyane ayibiza ngokuba yiLeone ngelixa amaFrentshi esithi nguLeo.
Uphawu olwahlukileyo: U-Aquarius. Oku kubalulekile kuba kubonakalisa ukuzola nokunyaniseka kwabemi base-Aquarius ekucingelwa ukuba banako kwaye banayo yonke into abazelwe phantsi komqondiso welanga ka-Leo.
Umhlaza womntu kunye nomfazi wanamhlanje ebhedini
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Ityhila ubungakanani bokusesikweni kunye nokusebenza okukhoyo kubomi babo bazalwe nge-22 ka-Agasti kodwa nokuba baphelelwe ngumonde kangakanani.
Indlu elawulayo: Indlu yesihlanu . Olu lubekwe kwindlu lubonisa iziyolo zobomi ezivela kwi-galmes, imisebenzi eyonwabisayo kunxibelelwano lwasentlalweni. Oku kuyacetyiswa kwimidla yeLeos kunye nendlela abaziphatha ngayo ebomini.
Umzimba olawulayo: Ilanga . Eli ziko lasezulwini kuthiwa linefuthe kubunkokeli nakwimveliso. Isikhundla selanga ngomhla wokuzalwa komntu simisela uphawu lwe-zodiac. Ilanga likwacebisa uzinzo kubomi baba bantu.
Isiqalelo: Umlilo . Le nto ifuzisela ukuxhotyiswa nokungoyiki kwaye ithathwa njengeyinempembelelo kwinkalipho kunye nokwazisa kwabantu abazalwe ngo-Agasti 22. Umlilo ufumana intsingiselo entsha ngokunxulumana nezinye izinto, usenza izinto zibile ngamanzi, zifudumeze umoya kwaye zimodele umhlaba.
umhlaza welanga i-scorpio inyanga yenyani ekhulayo
Usuku lwethamsanqa: iCawe . Kulawulwa liLanga namhlanje luphawula ukuqaqamba kunye nendlela kwaye kubonakala ngathi kunendlela efanayo yokukhusela njengobomi babantu beLeo.
Amanani anethamsanqa: 1, 5, 13, 19, 21.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Agasti 22 Zodiac ngezantsi ▼
Umfazi we-gemini uthandana nendoda ye-aquarius
loluphi uphawu ngo-oktobha 15
Scorpio indoda inothando
loluphi uphawu ngoJanuwari 23
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli-28